विकासका ठूलाठूला सपना गरिब जनताप्रतिको अपमान : भुषाल « Janata Samachar
विकासका ठूलाठूला सपना गरिब जनताप्रतिको अपमान : भुषाल
प्रकाशित मिति : 8 May, 2018 2:09 pm
काठमाडाैं । नेकपा एमालेका उपमहासचिव घनश्याम भुषालले सपना देख्नु असाध्यै राम्रो भएतापनि सपना देख्नका लागि सुतिरहनु चाँही काम नलाग्ने कुरा भएको बताउनु भएकाे छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘वस्तुगत सपनाले हामीलाई ठाउँमा पुर्याउँछ तर सपना नै सपनाको खात लगाएर कतै पुगिन्न । सिटामोल खान नपाएर ज्वरोले मान्छे मरिरहेका बेला ठूलाठूला सपनाका कुरा गर्नु गरिब र निमुखा जनताप्रति भयंकर अपमान हो ।’
जनता टेलिभिजनको कार्यक्रम किताबका कुरामा अशेष घिमिरेसँग कुराकानी गर्दै भुषालले भन्नुभयाे रेल, पानीजहाज सबै राम्रा कुरा हुन् तर ती आजको प्राथमिकता हुन् वा होइनन् त्यो छुट्याउन सक्नुपर्छ । आवश्यकता अनुसारका सपना र विकास परियोजनातर्फ ध्यान दिनुपर्ने उहाँको धारणा छ ।
राजनीति र विचारविनाको विकास नहुने भुषालको ठम्याइ छ । उहाँ भन्नुहुन्छ राजनीति, सिद्धान्त र मानवीयता भन्दा टाढा विकासका मात्र कुरा गर्नु निरर्थक हुन्छ । ‘दिक्क लाग्ने गरी’ आजको राजनीतिमा, मिडियामा विकासको ‘हनुमानचालिसा’ चढेको उहाँको निश्कर्ष छ । उहाँका अनुसार ‘निकै ठूलो कष्ट, पीडा र आँशुको बलमा श्रमको ठूलो तलाउमा फुलेको कमलको फूल हो विकास’ । उहाँ भन्न्ुहुन्छ, विकासले सुख मात्र दिएको छैन, इतिहासमा ठूल्ठूला दुख समेत निम्त्याएको भुल्न हुँदैन ।
कार्ल माक्र्सको जन्म दुर्इ शताब्दीका सन्दर्भमा माक्र्सका योगदानबारे चर्चा गर्दै उहाँले भन्नुभयाे, माक्र्सले पहिलोपटक मान्छेका लागि मान्छे महत्वपूर्ण छ । यसैगरी माक्र्सले सँधै वाैद्धिक विमर्श र आलोचनात्मक चेतनाका लागि प्रेरित गरेको उहाँको भनाइ छ । उहाँ भन्नु हुन्छ आलोचना गाली होइन, आलोचना को अर्थ वस्तुगत हुने, प्रश्न उठाउने र उठेका प्रश्नहरुको आधारमा विश्लेषण गर्ने, निश्कर्ष निकाल्ने परिपाटी हो ।
उहाँले राजनीतिक नेतृत्वले समाज र मान्छे पढ्नुपर्ने बताउनु भयाे । पढेको नेता हुनु र नपढेको नेता हुनु स्वयम् नेता हुनु र नेता नहुनु जत्तिकै फरक कुरा भएको उहाँको भनाइ छ । उहाँ भन्नु हुन्छ, हामीकहाँ पढ्ने मानिसहरुलाई होच्याउने अपमान गर्ने र ठोस प्रश्न गर्नेहरुमाथि गाली गर्ने रोग छ । यस कारणले नपढ्नेहरु नेतृत्वमा पुगी आफ्नो अभिमान देखाउने, आफ्नो पावर देखाउने, धर्तीमा आँफुमात्र ठिक र जाति, आँफुमात्रै नेता भन्ने भ्रममा दौडिहेका हुन्छन् । यो धर्तीमा यस्ता लाखौँ करोडौँ नेताहरु आएको गएको कुरा तिनलाई हेक्का हुन्न । पावर भन्दा फरक अरु चिज पनि छ समाजमा भन्ने ति नपढ्नेहरुले बुझ्दैनन् । यसरी नपढेको लिडर फराकिलो र व्यापक नहुनेभएकाले क्रान्ति फाइदा पनि हुँदैन । उहाँले क्रान्तिको लागि पढेको फराकिलो र आँफैप्रति पनि आलोचक नेता चाहिने कुरामा जोड दिनुभयाे ।
भुषालले अहिले जनवादी क्रान्ति पुरा भएको र राजनीतिक आन्दोलनको अर्को च्याप्टर शुरु भएको बताउनु भयाे । भुषालले ‘च्याप्टर क्लोज’ भन्ने शब्दको दुरुपयोग गरी विरोधीहरुले आँफुलाई गलत हिसाबले लखेटेको पनि उल्लेख गर्नुभयाे । उहाँ भन्नुहुन्छ ‘यो च्याप्टर क्लोज, कुनै पागल कुकुरले लखेटिरहेको जस्तो लाग्थ्यो’ । क्रान्तिको दौरानमा राजनीतिको एउटा च्याप्टर क्लोज भएपछि अर्को च्याप्टर ओपन हुन्छ, तर राजनीतिकै च्याप्टर क्लोज भयो भन्नु नादान कुरा भएको उहाँको निश्कर्ष छ ।
भुषालका अनुसार माक्र्सले पढिसके, लेनिन माओले लेखिसके अब त किन पढ्ने हो? कति पढ्ने हो ? अब त गर्ने हो भनेर मानिसहरु, नेताहरु यथार्थभन्दा टाढा पुगेका छन् । तर फेरिपनि मानिसले कामका दौरानमा पढ्दै, ज्ञान आर्जन गर्दै, मानवसमाजमा त्यसलाई प्रयोग गर्दै प्रत्येक चोटी आँफूलाई नयाँ नयाँ बनाउँदै लाने कुरामा प्रयत्न गरिरहनुपर्ने भुषाल बताउनु हुन्छ ।
‘मेलम्ची आयोजनामा हाम्रो दोष छैन’(भिडियोसहित)
काठमाडौं । बंगलादेशको रनर अटोमोबाइल्स लिमिटेडद्वारा उत्पादित मोटरसाइकल नेपालमा रमन मोटर्सले बिक्री गरिरहेकाे छ । रमन ग्रुप
‘लोकतन्त्रमा सूचनाको हकदार नै जनता’
काठमाडौं । राष्ट्रिय सूचना आयोगका आयुक्त किरण पोखरेलले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सूचनाको अन्तिम हकदार नै जनता